novembre 2016 – filazantsaramada
Jesosy Kristy no Tompo Faritra tena saro-dàlana ny mankany Ambohitompoina, tànana iray, sahabo ho eo amin’ny 100 Km mianatsimo miala an’Antananarivo. Ny Pastora Rado Lalaina Henintsoa Andrianomenjanahary no notendren’ny Synodam-Paritany Avaratrimania (SPAM) hitondra ny Fileovana Ambohitompoina. Miroso tanteraka amin’ny fanamafisana ny fampielezana ny Filazantsara any amin’io faritra io ny tenany sy ny Fiangonana ankehitriny satria […]
Publié parfilazantsaramada novembre 30, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Horonan-tsarimihetsika
MILA FITSAHARANA VE IANAO?
Manoro hevitra antsika ny Tenin’Andriamanitra. Hoy Jesosy: « Mankanesa aty amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. » Matio 11:28 Fitsaharana! Tsy maintsy miasa ny olona. Misy noho izany ireo mitotototo mitady asa, mihazakazaka, mivezivezy mitady zava-tsoa, nefa tsy nahita izay nahafa-po. Reraka, Tsy mahita fitsaharana. Miasa fatratra nefa […]
Publié parfilazantsaramada novembre 25, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MILA FITSAHARANA VE IANAO?
Fanompoam-pivavahana ho fanokafana ny taom-pianarana 2016-2017 Ho fanombohana ny taom-pianarana 2016-2017, ny Lycée Andoharanofotsy dia nikarakara fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ho fisaorana an’Andriamanitra sy ho fangataham-pitahiana ny taom-pianarana 2016-2017. Nasaina nanatrika izany ny Feon’ny Filazantsara (FF) izay nosoloin’Atoa Rakoto Rabehajaina Louis (Program Manager) sy Rtoa Raveromanana Lalao (Audience Relations) tena, ka nandray anjara fitenenana mahakasika ny Feon’ny […]
Publié parfilazantsaramada novembre 23, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Lycée Andoharanofotsy
Miitatra hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo (SPAnta) Totonsa soamantsara ny 10-11 Novambra 2016 lasa teo ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” niarahana tamin’ny Fitandremana Tanjombato, Fileovana Anosibe (SPAnta). Fiangonana dimy ao anatin’ny Fitandremana Tanjombato no nandray anajara ka nahatratra 25 ireo mpiofana. Tonga nanatrika sy nandray anjara mavitrika nizara tamin’ireo mpiofana ny foto-pinoana […]
Publié parfilazantsaramada novembre 17, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
NY FIANTRAN’NY RAY NY ZANANY
« Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao. » Isaia 49:15 Io teny io no omen’i Jesosy Tompo anao amin »izao fotoana izao. Jehovah Andriamanitra tsy mba manadino anao, fantany ny zavatra rehetra mitranga eo amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada novembre 17, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIANTRAN’NY RAY NY ZANANY
Tanora Taratry ny Filazantsara (TTF) “Oniversiten’Antananarivo”
“Mandehana ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra” Tsy mionona fotsiny amin’ny Fitoriana ny Filazantsara amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana”, na ny fandefasana horonan-tsarimihetsika, na ny famakiana ireo boky Literatiora Kristiana ireo mpikambana ao amin’ny TTF eny amin’ny Oniversite Antananarivo, izay mpiara-miasa amin’ny Feon’ny Filazantsara “FF”. Tafiditra tao anatin’ny programan’asan’izy ireo ny taona 2016/2017 […]
Publié parfilazantsaramada novembre 16, 2016 novembre 16, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Tanora Taratry ny Filazantsara (TTF) “Oniversiten’Antananarivo”
Mitohy ny Asa ao amin’ny FLM. Nahatratra zato mahery ireo zoky olona, ankizy ary Kristiana Tanora Loterana tonga niara-nivavaka sy notolorana lamba firakotra tao amin’ny FLM Ambohimandry Mandrosoa Famonjena, Fitandremana Arivonimamo, Fileovana 67 Ha Fahamarinana. Ny Talen’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Andriamanjaka Daniel no nizara ny Tenin’Andriamanitra sy nanentanana ireo Tanora Kristiana hianatra ny Tenin’Andriamanitra. Nahatratra […]
Publié parfilazantsaramada novembre 10, 2016 novembre 9, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Programan’asa Fanasoavana
TIA ANAO JESOSY, MIANTSO ANAO IZY HIBEBAKA.
“Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin’ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsaran’ Andriamanitra.” Romana 2:5 – Andriamanitra mety ho tezitra. Inona no anton’izany? Ny valiny: Ny fahotana, ny tsy finoana Azy koa dia efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra. Io no miteraka ny fahatezerany. Mitarika ny fahatezerany ny ditra […]
Publié parfilazantsaramada novembre 10, 2016 novembre 9, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TIA ANAO JESOSY, MIANTSO ANAO IZY HIBEBAKA.
Lycée Anjepy sy Fanazava
Fanolorana sertifika ireo mpianatra nahavita fianarana Noho ny fanombohan’ny taom-pianarana 2016/2017, Rtoa Felana mpiara-miasa an-tsitrapo FF amin’ireo Sekoly ireo dia tena resy lahatra fa tsara raha mametraka ny fianarany eo am-pelan-tànan’Andriamanitra ireo mpianatra. Nanasa ny solon-tenan’ny FF noho izany izy hanolotra ny sertifikan’ ireo mpianatra nahavita ny fianarany tamin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” atolotry […]
Publié parfilazantsaramada novembre 9, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Lycée Anjepy sy Fanazava
« Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, dia ny lalàn’ny fahafahana, ka maharitra amin’izany raha tsy mpihaino manadino, fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin’ny asany izany olona izany. » Jakoba 1:25 – Natao ho fanomanana ny Testamenta Vaovao ny Testamenta Taloha. Jesosy no fahatanterahan’ny lalàna. Ny Testamenta Taloha no nanomezan’Andriamanitra ny Didy folo tamin’ny alalan’i […]
Publié parfilazantsaramada novembre 4, 2016 novembre 3, 2016 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur DIDY VAOVAO